What is EM? – bokashimyanmar.com
by Bokashi Myanmar May 20, 2018 June 14, 2018 Leaveacomment
Healthy soil and clean water are maintained by the diversity and balance of the community of microorganisms within them. For example, when the balance of microorganisms in the soil is disrupted, soil will be impoverished and crops will not grow well. However, if native microorganisms are activated, soil conditions will improve. When the soil microbiology is in balance, plants will be healthy, thus more resistant to damage caused by stressors such as disease or harmful insects.In polluted rivers, species that cannot survive inadegraded environment die out and the ecosystem becomes degraded. Conversely, if the diversity of microorganisms is rich, nature’ s self-purifying ability is enhanced and clean water will return. The reason that EM can solve the problems it does is that EM restoresahealthy balance of microorganisms in the ecosystem, thereby increasing its self-purification ability.
In recent years, many researchers have been focusing less on the activity of single-strains of microorganisms and more on aggregates of microorganisms called microbiomes. In agriculture, it has become apparent that when soil microbiomes are healthy, they will enrich the soil. Healthy aquatic microbiomes will help maintain the environmental purification capabilities of rivers and other bodies of water.Microbiome studies have shown that quadrillions of microorganisms live within and on the human body and that these microorganisms makeasignificant difference to human health. Many of them live in the human gut and affect not only people’ s physical health, but also their mental condition.
∗ EM, EM Logo, Effective Microorganisms, EM･1, Pro EM･1 and EM･X are trademarks or registered trademarks of EMRO and/or its affiliated companies in the United States and many other countries.
Text thanks to EMRO Japan
EM and bokashi info, Mandalaybokashi, effective microorganisms, EM, microbes, microbiome
Previous Entry Carbon farming.
Next Entry How EM works
English text follows!!! လူအများစုက တနင်္လာမနက်အလုပ်တက်ရတာကိုမကြိုက်ကြဘူးရယ်။ ဒါပေမယ့် ဘိုကာရှီမြန်မာမှာကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ခိုင်ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံးအလုပ်ကတော့ အပင်လေးတွေရွှေ့စိုက်ရတာပါပဲ။ တစ်ပတ်တာစတင်ဖို့ သိပ်ဆိုးတဲ့နည်းလမ်းတော့ မဟုတ်ဘူးမို့လား။ A lot of people hate going to work on Monday mornings, but here at Bokashi Myanmar it’s ok. Khaing’s favourite job is replanting seedlings, not suchabad way to start the week! /Bokashi Myanmar garden team #Bokashi #cleanyangongreenyangon #plantsforthefuture #soilrevolution
English text follows!!! ဘိုကာရှီမြန်မာက မီးဖိုချောင်စွန့်ပစ်အမှိုက်ကောက်တဲ့ကိစ္စ အပြောပဲမဟုတ်။ လက်တွေ့လုပ်ပါတယ်။ ခုမြင်နေရတာကတော့ ဒီနေ့ ရပ်ကွက်ဈေးထဲက ကောက်လာတဲ့ အဖြုံးတွေပါပဲ။ ဒါတွေကို နုတ်နုတ်စဉ်းမယ်။ ဘိုကာရှီဖွဲနုသုံးပြီး ပုံးထဲမှာအချဉ်ဖောက်မယ်။ ပြီးရင် သစ်ရွက်ခြောက်ပမာဏထပ်တူလောက်နဲ့ ရောပြီး မြေဆွေးပုံလုပ်မယ်။ နှစ်လလောက်နေရင် အရမ်းမိုက်တဲ့ မြေဆွေးရပါပြီ။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို နေ့တိုင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ပိုမို စိန်းလန်း သန့်ရှင်းစေချင်လို့ပါ။ We don’t just talk about collecting food waste here at Bokashi Myanmar — we DO it! This is the food waste we collected from our local market today. We’ll shred it, ferment it, mix it with the same volume of dry leaves - and inacouple of months we will have fabulous compost. And we do this every day. To make Yangon cleaner and greener. /Bokashi Myanmar team #bokashimyanmar #foodwasteisnottrash #yangonsbestcompost #askushow #seeyouatthefarmersmarket
English text follows!!! မကြာခင်မှာ ကြီးမားသန်စွမ်းလာတော့မယ် သခွားပင်ပေါက်လေးတွေ။ ဒီစနေနေ့ တောင်သူလယ်သမားဈေးမှာ နည်းနည်းပါးပါးထည့်ရောင်းဖို့ စဉ်းစားနေတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း မျိုးစေ့နည်းနည်းပါးပါးဝယ်။ က်ိတိုင်မြေဆွေးလုပ်။ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်စိုက်ပေါ့။ Baby cucumbers that will soon be strong and healthy! We’re thinking of bringingafew with us to the Farmers Market this weekend. Or buy some seeds and compost and grow your own! See you there! /Bokashi Myanmar seedling growers #bokashimyanmar #growyourownfood healthysoilhealthyplants
English text follows!!! ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံးသော အစားအစာအကြွင်းအကျန်တွေနဲ့ သဘာဝသစ်ရွက်ခြောက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်လုတ်ထားတဲ့ အိမ်တွင်းဖြစ် ဘိုကာရှီမြေဆွေးစတင်ရောင်းချနေပါပြီ။ သို့သော်ငြား အိမ်တိုင်ရာရောက် စနစ်အတွက် ဘယ်လိုထုတ်ပိုးရမလဲခေါင်းစားဆဲပါ။ ဆန်အိတ်ခွံတွေနဲ့ထုတ်ပိုးလို့ရပေမယ့် ပလပ်စတစ်တောင်ပုံယာပုံထပ်မထွက်စေချင်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့်ပဲ နေရာအစုံလိုက်ရှာဖွေပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ကိုယ်တွေလိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ သုံးပြီးသား ဂုန်နီအိတ်တွေရလာခဲ့ပြီလေ။ ဆေးနံ့လေးတွေတောင်သင်းလို့။ ဒါနဲ့ပဲတပုံကြီးဝယ်လာခဲ့ပလိုက်တယ်။ အားလုံးကောင်းဖို့ပါဗျာ။ We are starting to sell our homemade bokashi compost - made from Yangon’s finest food waste and local leaves. But we’ve been wondering how to deliver it. We don’t want to add to the plastic mountain by using rice sacks. So we hunted high and low and eventually found just what we need - used gunny sacks! (Withanice smell of spices). So we boughtawhole pile! Win-win! /Bokashi Myanmar compost team Ps want to buy some? Send usamessage or come by our stand at the Farmers Market on Saturday #bokashimyanmar #yangonsbestcompost perfectmonsoonmulch
English text follows!!! ခပ်သေးသေးအရာလေးတွေကအစ အမှိုက်ထွက်ပါတယ်။ အလှဆုံး ကြည့်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ သစ်သီးဝလံနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကတောင်မှပဲပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့ နောက်တခါ အသီးအနှံအခွံလေးလက်တစ်ဆုပ်စာလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လွှင့်ပစ်ခါနီးကျရင် ခဏရပ်ပြီး ဒီလိုလွှင့်ပစ်မယ့်အစား အိုးနဲ့စိုက်ထားတဲ့အပင်လေးတွေထဲများထည့်ပေးလို့ရမလား ပြောင်းစဉ်းစားကြည့်ပေးပါ။ နုတ်နုတ်စဉ်းပြီး အပင်ခြေမှာ ပတ်ပတ်လည်ပုံပေးပါ။ ဘိုကာရှီမလုပ်ဖြစ်သေးဘဲတောင် ဒါလေးတွေက အပင်ကို အာဟာရ ထောက်ပံ့ပေးပါလိမ့်မယ်။ ရိုးရှင်းသလောက် အရမ်းလည်းလန်းတာမို့ လုပ်စမ်းသာကြည့်လိုက်စမ်းပါတော့။ Every little thing generates waste. Even the most beautiful of fruit and vegetables. So stop and think next time you throw awayahandful of fruit peelings - could you give them toapotplant instead? Break them up and lay them round the plant. Even without bokashi they will gradually start to feed your plants. So simple and so smart. Just to do it! /Bokashi Myanmar gardeners #bokashimyanmar #feedyourplants #ourfoodistheirfood #foodwasteisnottrash
English text follows!!! ပုံမှန်မြင်နေကြရန်ကုန်က လသာဆောင်၊ မိတ်ဆွေတို့နေရာမှာရော ဒီလိုပဲလား။ လွန်ခဲ့နှစ်လ သုံးလ ဒါကို ကျမပထမဆုံးစမြင်ဖူးတုန်းက အပင်တွေကခြောက်လို့သွေ့လို့။ ရေဘယ်လောက်လောင်းလောင်း မရှင်တော့မယ့်ပုံ။ ကျမမှာလည်းဘိုကာရှီကမပါ၊မရှိ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျမမိတ်ဆွေကို သစ်သီးခွံလေးတွေနဲ့ အပင်ခြေလေးတွေ အုပ်ပေးဖို့ကူညီခဲ့တယ်။ ပျားလိမ္မော်သီးအခွံတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အကျန်တွေကို သေးသေးလေးတွေတုံးပြီး အပင်ပတ်လည်ပုံပေးခဲ့တယ်။ ပန်းခြောက်တွေ၊ ပေါင်မုန့်အသိုးအကျန်တွေ၊ ဖရဲသီးခွံတွေ၊ အကုန်ပန်းအိုးထဲထည့်ပေးခဲ့ကြတယ်။ ကော်ဖီမှုန့်တွေ၊ လ္ဘက်ခြောက်အကျန်တွေလဲ ထည့်ပေးတယ်။ လွယ်သလားမမေးနဲ့။ ခုကျ ကြည့်အုံး၊ ပြောင်းလဲသွားလိုက်ပုံကို။ စမ်းကြည့်ပြီးပြီလား။ A typical Yangon balcony! Does yours look like this? When I first saw itacouple of months ago the plants were dry and sad, no amount of watering would help. I didn’t have any bokashi with me, but I helped my friend start covering the soil with fruit and vegetable scraps. We cut up mandarin peels and vegetable leftovers into small pieces and put them round the plants. We chopped up wilted flowers, leftover bread and watermelon peels - all went straight into the flowerpots. And every time we had coffee grinds or tealeaves we added them too. So easy! And look at the difference! Have you tried? /Jenny and the Bokashi Myanmar team #bokashimyanmar #balconygarden #yangongarden foodwasteisnottrash
English text follows!!! ကိ်ုယ့်ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးကိုကြည့်ပြီး ဒီနေ့ပျော်နေကြတာ။ ဘိုကာရှီဖောက်သည်အများအပြားနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတာလဲ ကြည်နူးစရာ။ ဆိုင်မှာတထောက်တနားဝင်လာခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးပါနော်။ နောက်တပတ်မှထပ်ဆုံကြမယ်။ We’re really happy with how our stand looked today! And it wasapleasure meeting so many #bokashicustomers. Thanks to all of you who stopped by. See you next week! /Bokashi Myanmar team #bokashimyanmar #yangonfarmersmarket #bokashi #soilrevolution #yangonsbestcompost
Happy Birthday Inda! #bokashicakeparty #becauseifwewaitanylongeritwillmelt
Come see us tomorrow at the Farmers Market! We’ll be there from 7! /Bokashi Myanmar team #bokashimyanmar #yangonfarmersmarket #everysaturday #bokashiforlife
English text follow!!! တောင်သူလယ်သမားဈေးမှာ ရောင်းဖို့ ကိုယ်တွေမှာ မျိုးစေ့နည်းနည်းပါးပါးပဲရှိပါတယ်။ အပတ်စီတိုင်း မျိုးစေ့တွေကတူညီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် ဒါတွေကို ဘယ်လိုစိုက်ပျိုးကြမှာလဲ။ ဟောဒီမှာ စတင်စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့ အရမ်းမိုက်တဲ့ လမ်းညွှန်ချက်ကလေးပါ။ We havealimited number of seeds for sale at our bokashi stand at the Farmers Market, different ones each week. But how to grow them? Here’sagreat guide to get you started! /Bokashi Myannar #bokashimyanmar #yangonfarmersmarket growingherbsfromseeds
English text follow!!! ဒီမနက် ရန်ကုန်တောင်သူလယ်သမားဈေးမှာ ကိုယ်တွေကို လာရောက်တွေ့ဆုံအားပေးသွားကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်။ အရမ်းပဲကောင်းမွတ်တဲ့မနက်ခင်းလေးကိုပိုင်ဆိုင်ခွငိ့ရခဲ့ပြီး၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများအပြားကိုလဲပဲတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဘိုကာရှီနဲ့ပက်သက်ပြီး လည်း အများကြီးဆွေးနွေးခွငိ့ရခဲ့ပါတယ်။ နောက်တပတ်မြန်မြန်ပြန်ရောက်ဖို့တောင် မျှော်နေမိပါပြီနော်။ Thanks to all of you who came to see us at the Farmers Market this morning! Great morning, lots of positive people and good #bokashidiscussions. Looking forward to next week! /Bokashi Myanmar team #bokashimyanmar #yangonfarmersmarket #bokashiforsale #yangonsbestcompost #foodwasteisnottrash
အောက်မှာ မြန်မာလိုပါ ပါသေးတယ်နော။ We love our new logo! And we’re putting it on everything we can find! See you Saturday at the Yangon Farmers Market? /Bokashi Myanmar market team လိုဂိုအသစ်ကလေးတွေကို သဘောကျလိုက်တာ။ ရှိသမျှပစ္စည်းတိုင်းမှာ တံဆိပ်တွေလိုက်ကပ်ပလိုက်တယ်။ ရန်ကုန်တောင်သူလယ်သမားဈေးမှာ စနေနေ့ တွေ့ကြမလား? #bokashimyanmar #yangonfarmersmarket #CEM #soilrevolution